"Rakkina cimaa keessa galleera, garu ni mo'anna'' - Janaraal Birhaanu Juulaa - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Borkena
Sirni gaggeessaa janaraaloota lamaan Sambataa darbe ajjeefamanii galma Barkumeetti bakka pirezidaantiin biyyattii fi Ministira Muummee dabalatee qondaaltoonni motummaa olaanoon argamanitti raawwateera.
Sirna kanarratti qondaalota biroo waliin toora fuulduraarra kan turan Ministirri Muummee Abiy Ahimad gaddaa fi bo'aa irra deddeebiin foddaa TV'n mul'achuun alatti sirnicha irratti haasaa hin taasifne.
Maatiin janaraaloota ajjeefamanii akkasumas itti aanaa Janaraal Se'aare kan ta'e Janaraal Birhaanu Juulaa fi waahilli isaanii Janaraal Ababaaw Taddasa imiimmaaniin dabaalanii haasaa jabaa taasiisaniiru.
"Waranaana keenya ijaaruuf ogganaa cimaa fakkeenya nuuf ta'an turan''
Sochii qabsoo hidhanoo waggoota 17 janaraal Se'aare waraana keenya ijaaruuf akka fakkeenyaatti itti fayyadamaa turre jedhan Janaraal Birhaanu Juulaa.
Se'aaren ijaarsa waraanaa, qophii fi hoggansa lolaa, gootummaa, rakkina cabsanii darbuu fi ciminaan fakkeenya gaariidha jechuun ibsaniiru.
''Hoggansi isaan agarsiisan, haalli itti isaan jiraatan kan dhaloota ijaarudha'' jechuun ture kan ibsaniin.
"Nutis fakkeenyummaa Janaraal Se'aare fudhachuun Raayyaan Ittisaa, biyyasaa eeguu akka danda'uu fi raayyaa akka warra kaaniif ta'uu danda'utti goota ta'e uumuuf fakkeenya mummee turan" jechuun dubbatnaiiru.
''Janaraal Se'aaren nama amala tasgabbaa'aa qaban, kanneen biroo kan tasgabbeessanii fi kan nama kabajan turan'' jedhan.
Janaraal Gazaa'iis kaasuun nama biyyattii kanaaf olmaa olaniidha jedhan. Erga heerri mootummaa raggaasifameen booda miseensa Raayyaa Ittisa biyyaa ta'uun hojiiwwan gurguddaa raawwataniiru jedhan.
''Hogganaa lojistikii cimaa humna olaanaa hatattamaan qopheessuu fi sochoosuu danda'anidha'' jechuun dhugaa bahaniifii jiru.
Janaraal Gazaa'iin loojistikii Raayyaa Ittisaa kan kan gurmeessanii fi kan ijaaran, "mahaandisa loojistikii" jennee waamna jedhan.
"Rakkina cimaa keessa galleera, garu ni mo'anna''
Janaraalota akkaasiin waggoota 30 fi 40 keessatti uumaman dhabuun baay'ee nama dhukkuba kan jedhan Janaraal Birhaanuun, haala du'a isaanii kaasuunis imimmaan hudhamaa dubbataniiru.
''Biyyaaf hojjachaa, hundumaa wal-dandeessisaa, hunda tajaajilaa, hunda dhagahaa, hunda keessummeessa yeroo jiruutti maal balleesseeti kan ajjeefamu jedhee gaaffii yoon kaasu akka nama tokkotti baay'ee na dhukkubsa " jedhan.
Janaraal Se'aaren dharraa aangoo hin qaban kan jedhan janaraal Birhaanuun, hojjachaa kan turanis namoonni akka hin buqqaanee fi akka hin duuneef ture jechuun ibsaniiru.
''Wanti uumame baay'ee na gaabbisiiseera, na aarseera, garuu kaayyoowwan janaraal Se'aaren hojjachaa ture kutannoon cimsinee hojjachuun feedhii warra ajjeesanii galma akka hin geenye taasifna,'' jedhaniiru.
Waraanni keenyas tokkummaa isaa eeguun fakkeenyummaa fi cimina Se'aare qabate biyya isaa Itoophiyaa eeguuf tokkummaan akka dhaabbatuuf waamicha taasisaniiru.
Kaayyoon ajjeechaa janaraalota kanneen irratti raawwatamee ''nu bittimsuuf'' kan jedhan Janaraal Birhaanuun, ''Sabaan wal-dhabne akka wal nyaannuuf, mootummaan akka hin tasgabboofneefi akka diigamnuufiidha. Yoo tasgabbaa'u dadhabne ammoo maqaa mootummaa ce'umsaatiin fiigicha gara aangootti taasifamuudha'' jedhan.
''Afaan Oromoon mammaaksa 'gadheen goota galaafatti' jedhu tokkotu jira. Waan kana fakkaatuuti nu mudate. Kanaafuu rakkoo olaanaa keessa galleera."
"Kanneen aangoof dheebotanii obbolootasaanii galma walgahii keessatti fixan rakkina nutti umaniiru."
"Hoggantoota filatamoo keenya dhabneerra. Miira gaddaa olaanaa keessatti argamna, garuu ni mo'anna'' jechuu miira gaddaa fi aariin dubbatanii.
Warra gocha kana raawwatanis 'guddis baddee' jedhaniiruun.
Goodayyaa suuraa Maatii Janaraal Se'aare Makonnin
Ilmi Jeneraal Se'aare Makonnin Maashoon abbaasaa 'nama tokkummaa, wal-danda'uu, waliin hojjachuutti amanu' ta'uu ibse.
"Janaraal Se'aaren waan du'eef biyyatu diigama miti, jabaannee yoo dhaabanne biyyatti tokko goona'' jechuun dubbate.
Sirnicharratti kan argame ilmi janaraal Gazaa'ii Abarraa Kibroom, jaalallisaa baroota kan qaxxamuru, haadha warraasaas nama jaalatu, gara laafeessa, nama kabaja, obsaa, gamna, beekaa, nama yaadaati jechuun abbaan isaa naamusa qabu gaddaan ibse.
Janaraal Gazaa'ii soorama erga bahanii boodas biyyaa fi uummatasaaniif otoo dadhabe, nuffe hin jenne hojjachaa nama turan ta'u Kibiroom itti dabaluun kan dubbate.
Sirnicharratti hiriyaan Janaraal Se'aare, Janaraal Ababaawu Taaddasa ''ejjannoosaatti nama cichu, faayidaa dhuunfaa caala kan uummataa dursu, jireenyasaa guutuu uummataaf nama of kenne" jechuun Janaraal Sa'aare yaadatan.
''Gootomsuu nama beekan, rakkoof fala barbaadu, nama waraana beekan, waraanaaf qophii barbaachisu nama beekan, gamna, fakkeenya gootaa ture'' jedhan.
Itti dabaluunis amantii fi sabaan nama akka hin qoodne jeneraal Ababaaw ragaa bahan.
Haasaa isaanii keessatti ''waan tokko isinitti haa himu.. waanti fedhe haa dhalatu...jijjiiramni kun erga dhufee booda gartuun muraasni akka gantuutti isa lakka'aa ture'' jedhan.
Janaraal Se'aaren dhiibbaan akka irra gahe fi maatii kootu bittima malee Itoophiyummaa koo dabarsee hin kennuu'' jechuusaanii dubbatan.
Janaraal Ababaaw waraana injifachuuf hojiin loojistikii murteessaa ta'uu kaasuun ogeessi Loojistikii jabaa Janaraal Gazaa'iin gitu biyyatti keessaa hin jiru'' jechuun ibsan.
''Yaada haaraa dhiyeessaa, hubatadha, fageesse raaga, nageenya amma jiruuf hooggana bu'uura kaa'ee'' jechuun ibsan. D'ua janaraalota kanaatti caalatti kan gaddisisee akkaata du'a isaanii ta'uu himan.
Xumura irrattis, ''quba walitti qabuurraa otoo dhaabannee yaadne, yaadu dadhabnaan garuu dhiigarraa homtuu hin baratamuu'' jechuun yaada kennan.